धरान | tour Khabar
पूर्वको पर्यटकीय शहर धरानको इतिहास खोज्दै जाँदा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेर राणासम्म पुग्छ । सन् १९५८ सालमा चन्द्रपुर बजार (हालको पुरानो बजार) बसालेर धरान सहरको बस्ती बसाएको इतिहास छ । इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई काठ आपूर्ति गर्न धरान हालेर चारकोसे जंगल फँडानी गरिएकाले यस ठाउँको नाम धरान रहेको हो । १९९० सालको भूकम्पपछि अर्का राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्शेरले हालको नयाँ बजार भनिने जुद्धनगर बसाए ।
२०१० सालमा ब्रिटिस सरकारले ब्रिटिस गोर्खा सैनिक कार्यालय स्थापना गरेपछि पूर्वी पहाडी जिल्लाको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा धरानको विकास भएको हो । गोर्खा शैनिकको कार्यलय स्थापनाले धरानलाई पूर्वी पहाडी जिल्लाको नाकाको रुपमा विकसित गरेको पाईन्छ ।
स्थानीय बुढापाकाका अनुसार पाल्पाका सेनवंशी राजाले विजयपुर गढीलाई सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण किल्ला बनाएका थिए । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले १८३१ सालमा सम्झौता गरेर नेपालमा गाभ्नुअघि विजयपुर किरात प्रदेशको राजधानी थियो । त्यही विजयपुरगढी धरानको शिरका रुपमा रहेको छ ।
वि.स. १९५० तिर घना जङ्गल फँडानी गरेर सानो बस्तीबाट सुरुवात भएको धरान, वि.स. १९५९ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्र शमशेरले चन्द्रनगर (हाल पुरानो बजार) र वि.स. १९९० तिर श्री ३ जुद्ध शमशेरले जुद्ध नगर (हालको नयाँबजार) बसालेको इतिहासमा पाइन्छ । वि.स. २०१० सालमा पूर्वाञ्चलको लागि ब्रिटिस गोर्खा भर्ती केन्द्र धरानमा स्थापना भए पछि मुख्य रुपमा धरानमा बसोबास तथा चहलपहल बढेको हो ।
२०७१ वैशाख २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार पाँचकन्या गाविसलाई पनि धरान नगरपालिकामा गाभी २३ वडा कायम गरियो । पुनः २०७१ मंसिर १६ गते नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को निर्णय अनुसार विष्णुपादुका गाविसलाई धरान नगरपालिकामा गाभेर २७ वडा कायम गरि उप(महानगरपालिका घोषण गरिएको हो । गत फागुन २७ गते पुन त्यही क्षेत्र कायम गरि २० वडा कायम गरिएको छ ।
बहुजाति, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक सहरको रुपमा धरानलाई चिनिदै आएको छ । यो तराई र पहाडको संगमस्थल पनि हो ।
गारेर्खा शैनिकको कार्यालय उठेर पोखरा गए पछि उक्त स्थानमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान निर्माण भएको छ । देशकै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षालयको रुपमा प्रतिष्ठान विकसित भएको छ ।
धरान शैक्षिक हव पनि हो । कृषि इन्जिनियरिङ पढाइ हुने एक मात्र सरकारी क्याम्पस यहीँ छ । केन्द्रीय खाद्य प्रविधि क्याम्पस र संस्कृत क्याम्पसले धरानलाई पूर्वकै शैक्षिक केन्द्र बनाएको छ । यहाँ पौराणिक महत्व बोकेका पीण्डेश्वर, दन्तकाली, बूढासुब्बा, पञ्चकन्या, विष्णुपादुकाजस्ता धार्मिकस्थल छन् ।
व्यवस्थित, सफा र सुन्दर शहर धरानको नामसँग भ्रपू लाहुरेहरुको नाम जोडिएर आउछ । अवकाशप्राप्त ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले धरानलाई आवासीय सहर बनाएका हुन । उनीहरुले धरानलाई आधुनिकरण गर्न समेत ठूलो सहयोग गरेका छन् । चिटिक्क परेका घर । घरसँगै सुन्दर बगैँचा, व्यवस्थित ढलसँगै सफा र चौडा पक्की सडक धरानको पहिचान हो । धरानलाई व्यस्थित गर्न यहाँका जनताले कुनै कन्जुसाई गरेका छैनन
पूर्वी पहाडको नाका
धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा भोजपुरलगायतका पूर्वका पहाडी जिल्ला प्रवेशद्धार धरान हो । पहाडका उत्पादन धरानमा रहेको कृषी उपज बजार केन्द्रमा संकलन गरि विश्व बजारसम्म धरानले पुर्याउदै आएको छ । पहाडी क्षेत्रको व्यापारीक केन्द्रको रुपमा धरान रहेको छ । नुनदेखि सुनसम्मको कारोवार गर्न धरान आउने गर्दछन् ।
कसरी पुग्ने धरान ?
काठमाण्डौंबाट रात्री तथा दिवा बसबाट धरान पुग्न सकिन्छ । काठमाण्डौ विराटनगर हवाईमार्गको यात्रा गरे पछि विराटनगरबाट ३८ किमी दुरीको उत्तरमा पर्दछ । त्यहाँबाट सार्वजनिक बस तथा ट्याक्सीबाट पुग्न सकिन्छ ।
धरानबाट पूर्वी नाका काकरभिट्टा १७० किमी दुरीमा पर्दछ । जोगमुनी नाका ४३ किमी टाढा पर्दछ । धरानबाट चीन जोड्ने किमाथांका नाका ४३५ किमी टाढा पर्दछ ।
धरानमा घुम्न लागयक स्थानहरु
धरान आएर यहाँ धार्मिकस्थलहरु घुम्न लागयक छन् । पौराणिक महत्य बोकेको पिण्डेश्वर बाबाधाम, दन्तकालि मन्दिर, बुढासुब्वा मन्दिर, भताभुंगे दरवार, धरानमौ रहेका छन् । एकदिनभरीमा यि क्षेत्र घुम्न सकिन्छ । विष्णुपादुका मन्दिर पनि धरानमा पर्दछ । धरानदेखि पश्चिम उत्तर ४ किमी दुरीमा पर्दछ ।
धरानदेखि नजिक रहेका चतराधाम, बराहक्षेत्र, रामधुनी पनि एक दिनको प्याकेज बनाएर घुम्न सकिने स्थानहरु हुन ।